Alice Jacob oo shan sano jir ah dhaqdhaqaaqe waxay baraneysaa nolosheeda bilowgeeda in u istaagida waxaad aaminsan tahay ay runti isbedel sameyn karto.
Sidee haweenku u doortaan dharka?
In kasta oo xawliga shaqadu si xawli ah ku socdo, haddana nolosheennu marba marka ka dambaysa midab bay noqoneysaa. Sidaa darteed, xulashada dharka shaqada, waa inaannaan noqon sidii cufis sidii hore oo kale, laakiin waa inaan noqonno deeqsi oo aan luminin habdhaqanka dheddigga, quruxda badan oo aan u baahnayn soo jiidashada dumarka; Dhalinyar iyo xarrago, sim ...